Shiftoonni Waliin Dhahuu Itti Fufan!
Shiftoonni Waliin Dhahuu Itti Fufan! Baarentuu Gadaa Irraa Shiftoonni sirna hin beekan, seeras hin qaban, seerri isaan hin abboomu. Safuu, duudhaa , namni maal naan jedhaan isaan bira hin jiru. Bor maal taanaanis qayee shiftootaa hin jiru. Shiftoonni waan saamamu argannaan weeraranii abbaa qabeenyichaa ajjeesuun, irraa hari’uun, hidhanii dararuun saamanii nyaachudha. Shiftoonni har’a maqaa mootummaatiin […]